Alps nwere ike ida 70% nke snow ha site na njedebe nke narị afọ | Network Meteorology
Alps, otu n'ime ugwu kachasị mkpa, nwere ike ịhapụ, maka ọtụtụ akụkụ, enweghị snow site na njedebe nke narị afọ Dị ka otu nnyocha e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ The Cryosphere si kwuo, ọ bụrụ na e meghị ihe ndị siri ike iji gbochie okpomọkụ ụwa dum ka ọ na-arị elu.
Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme egwuregwu snow, jiri oge ahụ mee ihe.
Dị ka ọmụmụ na-ekpughe, ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ agbanweghị, ka ọ na-erule 2100, ihe ruru pasent 70 nke mmiri alpine pụrụ ịpụ n'anya, na ihe ruru 30% ma ọ bụrụ na egbutu ahihia na ọkara site na etiti narị afọ a, nke ka ga-adị ọtụtụ. Onye ndu akwukwo nke ihe omumu a, site na WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF aha ya bu Cristoph Marty kwuru na "nkpuchi elu ugwu nke Alpine ga-ebelata, ma ihe ndi anwuru anyi ga-achi ga-achi."
Obodo ukwu na obodo ntà di nso na Alps na-adabere kpamkpam na njem njem oyi, yabụ ọ bụrụ na ọdịda na-ada dị ka snow, »akụ na ụba na ọha mmadụ nke mpaghara nwere ebe ntụrụndụ ndị a ga-ata ahụhụ'Kwuru Sebastian Schlögl, sitere na SLF.
Ọ bụ ezie na obere snow ga-ebelata ọnụ ọgụgụ ihe ọghọm ụgbọ ala na imechi ọdụ ụgbọ elu, Anyi aghaghi ichefu na mmetuta ndi mmadu nwere na mbara uwa di oke. Ọ bụrụ na anyị aga n'ihu na-emerụ, na-ewu ihe dịka anyị na-eme na oke ọhịa, ọdịnihu na-adịghị mma nwere ike ịche anyị. N'ezie, Enwere ndị kwenyere na enweghị ike idozi mmebi ahụ anyị meworo, na ọ ga-akachasị mma ịmalite na ncha, na Mars.
Ka ọ dị ugbu a, ụmụ mmadụ enweghị nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị idozi maka ihe ha nwere, ma nwaa ịme ihe ndị dị irè, ọbụlagodi, mebie mmetụta nke mgbanwe ihu igwe.
I nwere ike ịgụ akwụkwọ zuru ezu ebe a (Ọ bụ n'asụsụ Bekee. Ọ bụ faịlụ .pdf).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Alps nwere ike ida 70% nke snow ha na njedebe nke narị afọ
Mgbanwe ihu igwe na Mars